Izingxenye ezishibhile zensimbi yensimbi yensimbi efektri nabaphakeli | I-Ouzhan
Izingxenye zensimbi yeshidi zifaka izingxenye zokugaya. Izingxenye zensimbi yeshidi ziyimikhiqizo esetshenzwe ubuchwepheshe beshidi lensimbi. Asikwazi ukwenza ngaphandle kwezinsimbi zensimbi yonke indawo ezimpilweni zethu. Izingxenye zensimbi yeshidi zenziwa ngamandla we-filament power, ukusika kwe-laser, ukucubungula okunzima, ukubopha insimbi, nokudweba kwensimbi. Kukhiqizwa ngokudweba, ukusika i-plasma, ukushisela ngokunemba, ukwakha umqulu, ukugoba kwensimbi, ukugoqa okufayo, ukusika i-jet yamanzi, kanye nokushisela ngokunemba.
Izingxenye zensimbi yensimbi eyenziwe ngokwezifiso ezinemba ngokunemba izingxenye zensimbi yensimbi yokunyathela izingxenye zemishini
Incazelo ephephabhukwini lochwepheshe bakwamanye amazwe ingachaza ishidi lensimbi njenge: ishidi lensimbi inqubo ebanzi yokusebenza ebandayo yamashidi wensimbi (imvamisa engaphansi kuka-6mm), kufaka phakathi ukugunda, ukubhoboza / ukusika / ukuhlanganisa, ukusonga, ukuwelda, i-riveting, nokusika, Ukwenza ( okufana nomzimba wemoto), njll. Isici saso esivelele ukushuba komfaniswano wengxenye efanayo. Imikhiqizo yensimbi yeshidi inezici zesisindo esincane, amandla aphakeme, ukuqhutshwa kukagesi, izindleko eziphansi, nokusebenza okuhle kokukhiqiza ngobuningi. Zinokusetshenziswa okuhlukahlukene. Ukusebenza kwensimbi yeshidi kusetshenziswe kabanzi emkhakheni we-elekthronikhi, ukuxhumana, imboni yezimoto, nemishini yezokwelapha. Isibonelo, ezimweni zamakhompiyutha, omakhalekhukhwini, ne-MP3, ishidi lensimbi liyingxenye ebaluleke kakhulu. Ngaphezu kwalokho, lisetshenziselwa ukwenziwa kwemishini yezokwelapha, futhi lisetshenziswa nasemizimbeni yezimoto neloli (amaloli), izindiza zezindiza namaphiko, amatafula ezokwelapha, uphahla lokwakha (ukwakhiwa) nezinye izinhlelo zokusebenza eziningi.
Ouzhan ngezifiso izingxenye ukubonisa
Izinzuzo ze-Shanghai Ouzhan sheet stamping metal automation izingxenye
- Ingabona inhlanganisela eguquguqukayo yemishini eminingi yokushaya, futhi ukulayishwa okuzenzakalelayo nokulayishwa kanye ne-workpiece clamping ngamazinga amaningi enkululeko kungahlangabezana nezidingo zezinqubo zokukhiqiza ezinzima;
- It kungenziwa ifakwe zezimboni CCD ukuhlolwa ezibukwayo ukuqaphela ukubamba mahhala workpieces eziyinkimbinkimbi;
- Ingakwazi ukubona ukukhiqizwa okuqhubekayo kwesisindo esisodwa, futhi ingabona ukukhiqizwa kokuguqulwa okuzenzakalelayo kwezinhlobo eziningi namaqoqo amancane;
- Ukulungiswa okuphezulu, ukufeza ukuxhumana neminye imishini efana namathuluzi womshini we-CNC, i-PLC, izinzwa zangaphandle, nokufeza ukulawula okuphephile nokuthembekile kokulandelana ngohlelo;
- Ukungaguquguquki: ukusebenza okuphezulu kokulwa nokushayisana, ukuhlolwa komkhiqizo, i-eksisi yangaphandle, ukuthambisa neminye imisebenzi yokuzikhethela;
- Imigqa yokukhiqiza ezenzakalelayo enabaningi e-inthanethi nokuhlelwa kwefektri "yedijithali" kungabonakala kalula, kusindiswe amandla okusebenza futhi kuthuthukiswe isithombe sobuchwepheshe sokukhiqizwa kwemboni.
Kwenziwe ngentando yethusi ishidi lokunyathela izingxenye zemishini
Izinto Ishidi eligoqiwe elibandayo, ishidi lashukumisa, insimbi engagqwali, i-aluminium emsulwa ne-aluminium alloy, ithusi elihlanzekile nensimbi yethusi, insimbi engagqwali yokucubungula ubuchwepheshe
Ukwelashwa komhlaba Ngokuya ngezimpawu zezinto zokusetshenziswa nezidingo zamakhasimende, ukwelashwa kwendawo kwenziwa ukufeza imiphumela emihle nehlala isikhathi eside.
Inqubo eyinhloko Ukucubungula kokunyathela kwensimbi
Ikhwalithi yokulawula Ukulawula Kusuka kokuqukethwe kuye ekupakisheni, yonke inqubo yokuxhumanisa umshini wokulinganisa ilawulwa ngokuqinile.
Ukusetshenziswa Ukusebenza kwensimbi kusetshenziswe kabanzi ezintweni ezisebenza ngogesi, ezokuxhumana, imboni yezimoto, imishini yezokwelapha neminye imikhakha, njengamacala ekhompyutha, omakhalekhukhwini, ukukhiqizwa kwemishini yezokwelapha, imizimba yemoto neloli (iloli), izindiza zezindiza namaphiko, itafula lezokwelapha, uphahla lokwakha (ukwakhiwa) nezinye izinhlelo eziningi
Imidwebo yangokwezifiso Yamukela i-CAD ezenzakalelayo, i-JPEG, i-PDF, i-STP, i-IGS kanye namanye amafomethi wefayela
Langaphambilini Izingxenye Ishidi nginyathela
Olandelayo: Izingxenye zensimbi zensimbi zokushisela